Otu esi etinye Liquorix Linux Kernel na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Bubata Liquorix Kernel PPA
Liqourix kernel bụ n'efu, isi mmalite mepere emepe Linux Kernel ọzọ maka kernel ngwaahịa na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. Ọ nwere ntọala omenala yana atụmatụ ọhụrụ wee wuo ya iji nye ahụmịhe desktọpụ na-anabata nke ọma, ọkachasị maka ngwaike ọhụrụ. Liquorix Kernel bụ ewu ewu n'etiti Linux Gaming, nkwanye, na ultra-latency chọrọ ma na-anya isi Linux Kernels ọhụrụ, na-enwe ọtụtụ alaka ịhọrọ site na kwụsiri ike, nsọtụ, na mmepe.
Maka ndị ọrụ na-achọ ịnwe kernel sistemu Ubuntu 20.04 LTS ha na-achọghị iji aka tinye kernels ma ọ bụ jiri ebe nchekwa nnwale / akwụghị ụgwọ, na-etinye kernel ndị ọzọ nwere ike ịbụ maka gị.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi ebubata Liquorix kernel PPA wee wụnye Linux Kernel ọhụrụ na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa gị.
Ọrụ mbụ bụ ibubata Liquorix Kernel PPA. Maka ndị ọrụ Ubuntu, nke a dị mfe site na iji PPA, ma otu ndị otu nọ n'azụ kernel Liquorix na-echekwa nke a ka enwere ike ịtụkwasị ya obi n'enweghị nsogbu.
Na-esote, megharịa ebe nchekwa APT gị iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ ahụ.
Iji nyochaa, ị nwere ike iji iwu grep lelee ọdịnaya faịlụ ahụ.
Dịka n'elu, PPA ebubatala ebe nchekwa ndị ahụ nke ọma.
Cheta, nọmba ụdị a ga-adị iche n'oge, na kernel Liquorix na-enweta mmelite mgbe niile.
ỊDỌ AKA NA NTỊ - Ọ bụrụ na i wepụghị kernel Ubuntu 20.04 ndabara, ị nwere ike ịga n'ihu n'okpuru. Ọ bụrụ na ọ bụghị, tinyegharịa kernel ndabara. Site na ndabara, ị ga-enwe kernel dị na sistemụ gị. Ị ga-ama ma ọ bụrụ na i wepụrụ ya ma ọ bụ na ọ bụghị na ihe atụ dị n'okpuru. Kernel ochie ka dị.
Dị ka o kwesịrị, ị nwekwara ike wepu ebe nchekwa PPA.
Dị ka n'elu, a na-akọwapụta aha ndị ahụ na ọbara ọbara ugbu a wepụ ngwugwu kernel.
Ị ga-enweta ịdọ aka ná ntị ozugbo.
Ịdọ aka ná ntị a bụ ma ọ bụrụ na i nwebeghị kernel ochie ị ga-adaghachi na ya. Ikpe nkuzi ka nwere kernel 5.11 dị adị. Ọ bụrụ na i wepụrụ ma hichaa kernel, tinyegharịa kernel Linux gị ka ndị a.
Dị ka ọ dị n'elu, ị darala azụ na Linux Kernel nke Ubuntu 20.04 dị adị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Liquorix Kernel na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. Emebere Liquorix Kernel maka ndị ọrụ desktọpụ nwere ngwaike kachasị ọhụrụ, mana enwere ike itinye nke a na desktọpụ Ubuntu ọ bụla ma ọ bụ nkesa. Agbanyeghị, a na-adụ ọdụ ka ịme nyocha tupu ịkwalite ya, ọ naghị atụ aro ka iji ya na sistemụ dị egwu ma ọ bụ ụdị mmepụta.
Categories Ubuntu Tags Linux kernel, Liquorix, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
2 echiche na "Otu esi etinye Liquorix Linux Kernel na Ubuntu 20.04"
November 17, 2021 na 5: 44 am
Eji m usoro a, ekwenyere m, site na saịtị liquorix.net.
Nke ahụ mere ka ọ bụrụ ihe niile.
November 17, 2021 na 6: 42 am
Daalụ maka ozi ahụ, Marshall.
Ee, ị nọ na ya, ị nwere ike iji script bash ma ọ bụ PPA. Agbanyeghị, PPA nwere ike bụrụ ihe a na-achọsi ike maka ndị ọrụ Ubuntu.
M ga-agbakwunye script bash dị ka nhọrọ nke abụọ, dị ka ọtụtụ ndị ọrụ distro ndị ọzọ na-eji ya, dị ka Debian, wdg ee ee, kpọọ oku.